Android ဖုန်း တစ်လုံး ၀ယ် မယ် ဆို လျှင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Android ဖုန်း တစ်လုံး ၀ယ် မယ် ဆို လျှင်
Posted by Mobile House on Feb 3, 2013 in Computers & Technology |7comments
မိမိ ၀ယ် မယ် ဆိုပြီး ရည်ရွယ် ပြီ ဆို ရင် အဲ့ ဖုန်း ရဲ့ ဈေး ကို အရင် ဆုံး Brand တွေ နဲ့ နှိုင်းယှဉ် ကြည့် ပါ ။ အောက် ထစ် Huawei အမျိုး စား နဲ့ နှိုင်း ယှဉ် ကြည့် ပါ တန် မ တန် ဆိုတာ ကို ။ ဥပမာ – ကိုယ်ဝယ် ချင် တဲ့ ဖုန်း က ၅၀၀၀၀ ဆို ပါ တော့ သူ ရမဲ့ အရည်အသွေး ဆို လို တာ က camera Megapixel ဘယ်လောက် ရ မလဲ ။CPU speed ဘယ် လောက် ရ မလဲ ? နာမည် မရှိ တဲ့ ဖုန်း အများ စု ကတော့ 600mhz နဲ့ 800mhz ကြား ထဲ ၀န်းကျင် တာ ရှိ ပါတယ် ။ 800mhz လောက် မှ သာ လျှင် အသုံး ပြုရတာ မြန်ဆန် မည် ။ဂိမ်း ကို မထစ် ပဲ ဆော့နိုင် မည် ဖြစ် သည် ။ဒါ တောင် ဂိမ်း အကြီး တွေ ဆို cpu speed 1Gb လောက် မှ သာဆော့ လို့ အဆင်ပြေ မည် ဖြစ် သည် ။၃၀၀၀၀ လောက် ကွာ တာ ကို မကြည့် သင်ပါဘူး ။ဖုန်းတစ် လုံးဝယ် ပြီးရင် အနည်းဆုံး ၆လ ကနေ ၁ နှစ် ထိ တော့ သုံးကြ မှာပါ ပဲ ။အဲ့ လို သုံး တဲ့ ချိန် မှာ သုံးမကောင်း လို့ နောင် တ မရ စေချင် ဘူး ။ထို့ကြောင့် ရေးပြီး တင် လိုက် ရခြင်းဖြစ် ပါတယ် ။
1 . Camera Megapixel 2.0 အထက် ရှိ သင့် သည် ။( မှတ်ချက် – တရုတ်ဖုန်း များတွင် ရေးထားသည် များ မှာ မှန်ကန်ခြင်းမရှိ သော ကြောင် စမ်း ကြည့် မှ သိနိုင်မည် )
3. internal storage ( ဖုန်းအတွင်း ပါဝင် သော မှတ်ဥာဏ် ) နည်းလား ။100,000 Ks ၀န်းကျင် ဖုန်း များ တွင် နည်းလေ့ ရှိ သည် ။ နည်းပါ က ဆော့ဝ် နှင့် ဂိမ်း အများကြီး သွင်း မရပါ ။ (မှတ်ချက် – ၁၀၀,၀၀၀ လောက် ၀န်းကျင် ၀ယ် လျှင် နည်းသည် မှာ အပြစ် တော့မဟုတ် )
5. မိမိ ၀ယ် မဲ့ ဖုန်း ရဲ့ အပို ပစ္စည်း ရှိမရှိ လဲ စဉ်းစား သင့် ပါတယ် ။ တရုတ် ဖုန်း အများ စု ဟာ အပို ပစ္စည်း (ဥပမာ – LCD , Touch ) စတာ တွေ အပို မလာပါဘူး ။ ဆော့ဝ် ပြန် ရေးမရ ပါ ဘူး ။ အဲ့ ဒါတွေ လဲ စဉ်းစား သင့် ပါတယ် ။
အပေါ် မှာ ရေးထားတာ တွေ က တော့ အဓိက စစ် ဆေး သင့် သည့် အချက်လက် တွေ ဖြစ် ပါတယ် ။တခြား စစ်ဆေး လို့ သင့် တာ တွေ အများကြီး ပါ ။ ဥပမာ – ဖုန်းလိုင်း ဆွဲ အားကောင်းမကောင်း ( အဲ့ ဒါ က တော့ ထည့် စမ်းကြည့် ပါ ) ၊ Wifi လိုင်း ကောင်းမကောင်း စသဖြင့် ပေါ့ ဗျာ ။
ဟုတ်ကဲ့ ဗဟုသုတရပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တကယ်တန်းဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုရင်တော်တော် ဦးနှောက် ခြောက်ပါတယ် ခုထိမ၀ယ်ရသေးဘူးဟိုလူက ဒါကောင်း ဒါမကောင်း နဲ့ ၀ယ်ပြီး အဆင် မပြေမှာလည်းကြောက်ပါတယ်( ချွေးနည်းစာကို) တကယ်လို့အဆင်ပြေရင် တစ်ခုကူညီ ပေးပါ
Sony ထဲကလို ချင်ပါတယ် ဈေးက 150000 အောက်ပေါ့ အင်တာနက်နဲ့ ကင်မရာ အဓိက သုံးမှာပါ
ဘယ် model ဘယ် brand ကသင်ကတော် လည်းဆိုတာ ညွှန်ကြားပေးမယ် ဆိုရင် ကျေးဇူး ကမ္ဘာ ပါ။
ပန်းသီးကိုက်တဲ့ ဟိုအီးပေါလောယီး လာမမန့်မယ့်ပိုစ့်လို့ …
ကျုပ်ကတော့ ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုရင် ဘော်ဒါတွေထဲ သူများကိုင်တာကြည့်ပြီး
ကြိုတ်ရင် အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပဲ ၀ယ်ဖြစ်တာများပါတယ်။
ဖုန်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဗဟုသုတ ဝေမျှမှုလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးပါခင်ဗျ။
စီ8825 ထက် ပိုကောင်းတဲ့ ဟန်းဆက် ထပ်ထွက်သလားဗျို့ 
မသိတဲ့လူဂို ဒါတွေနဲ့ ပြန်ပြီ ချရာဂျီး လုပ်ရမယ် …
အဲ .. ဒီလိုပြောလို့ အထင် မလွဲနဲ့နော့ …
ကျုပ်က ရီစရာ အနေနဲ့ ပြောတာ ….
ဖတ်ပြီးမှတ်သွားပါတယ်။ ဖုန်းဝယ်တော့မဲ့သူတိုင်းသိသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဗဟုသုတလည်းရစေ
လို့ စာရေးသူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်.။ ဒီပိုစ့်လေးကို ကူးယူထားခွင့်ပြုပါလို့…။
Android ဖုန်း လေးများ..မြန်မာပြည်တွင်ထုတ်လုပ်ဖို့.. အတွက်စိတ်မကူးကြဖူးလားဟင်…
ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးရောင်း.. ရတဲ့ငွေနဲ့.. စက်တွေဝယ်.. စက်ရုံတည်လုပ်လိုက်ရင်…